भिडियो | Diyopost
गोकुल बास्कोटामाथि कारबाही
प्यारो कमरेड परिवर्तनहार्दिक न्यानो अभिवादन ! साथै सुस्वास्थ्य एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना । विशेष लामो समयको अन्तरालपछि नयाँ योजना सम्प्रेषणको अत्यन्तै उत्साहजनक हलबाटै छोटो पत्र लेख्दै छु । आईरहे धेरै…
महिला कर्मचारीलाई हात हालेपछि रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट उद्योगका महाप्रबन्धक मल्ल पक्राउ !
हेटौँडा, १८ फागुन । महिला कर्मचारीलाई दुर्व्यबहार गरेको अभियोगमा हेटौंडा प्रहरीले रिद्धिसिद्धि सिमेन्ट उद्योगका महाप्रबन्धक लोकेन्द्र बहादुर मल्ललाई पक्राउ गरेको छ । उद्योगमा कार्यरत महिला कर्मचारीले आफूलाई हातपात र दुर्व्यवहार…